The Triangle Blogging: 3 Ihe ofga nke Ọma | Martech Zone
Anọ m na-arụ ọrụ ihe ngosi m na Corporate Blogging izu a. Na mkparịta ụka nke akwụkwọ taa gbasara Aboriginal Dijitalụ n'ezie kpaliri ma ịnụ ọkụ n'obi m na echiche m banyere isiokwu m kwesịrị ịbụ. Agbanyeghị na m ga-atụle uru na ọghọm nke ịde blọgụ Corporate, atụmanya m ga-abụ na ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe ahụ ga-achọ ịde blọgụ. Achọghị m ikwu ha ọ bụla site n'ụzọ ọ bụla, yabụ, m ga-achọ ịmalite ịnụ ọkụ n'obi ha. M na-egosi Blogging Triangle: 3 Elements nke Ọma gingde blọgụ.
Ọ bụ ezie na teknụzụ bụ ọkara, ka oge na-aga site na ịde blọgụ nyiwe na-etozu na teknụzụ na-akpata. Echere m na ihe nke blog na-aga nke ọma bụ ndị a:
content - nke a bụ isi ntọala nke blog gị. Mkparịta ụka na-agbanwe agbanwe, nke na-agbanwe agbanwe, na-emeghe ma na-echebara echiche banyere isiokwu ịchọrọ.
ahuhu - Ekwere m na ahuhu na-efe efe. Y’oburu n’inweghi obi uto na blog gi, ma obu ide ihe gi, ndi n’agu akwukwo gi gha hu ya ma puta… ngwa ngwa.
ọkụ - a blog adịghị eto na otu ntinye. Ọ na-achọ oge iji zute ma gafee atụmanya ndị na-agụ akwụkwọ gị na iji dọta ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ.
Akara ire ọkụ bụ ihe nnọchianya nke ire ọkụ nke ọdịnaya gị, agụụ na ọkụ ga-enwu! [Mmelite] Ire ọkụ bụ onye nnọchianya nke mkparịta ụka nke na-amalite site na ndị na - agụ akwụkwọ gị site na nkwupụta na trackbacks - ịmepụta mmekọrịta gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị ma gbasaa okwu gị.
More na-abịa na nke a… M ga-achọ ịnụ echiche gị The Triangle Blogging. Enwere ike iji ihe oyiyi ahụ ma soro ndị na-agụ akwụkwọ gị kwurịtara. M na-atụ anya nzaghachi gị!
Emere m ihe atụ ahụ n'onwe m na Onye na-ese ihe! Na bittbox Atụmatụ na-akwụ ụgwọ!
Enwere m mmasị na otu ị ga - esi mebie # 1 - Ọdịnaya.
Ma otu esi eme ọdịnaya ahụ (na ngosipụta / nhazi) site na ndepụta RSS
Ndewo Steven! O doro anya na - imewe na-ekere òkè dị ukwuu. Edere m banyere nke a ntakịrị na blọọgụ mana m na-akwụwa aka ọtọ na ọ bụghị nke ukwuu nke ọkachamara na mpaghara ahụ dịka saịtị dịka Ahụike Weebụ Ahụike.
Ekwesịrị m ide ntakịrị ihe banyere ndị na-ege ntị… na nke a, ndị a bụ ndị njikwa dị elu na ndị ọkachamara nọọrọ onwe ha na mpaghara ahụ nwere ike ịtụgharị uche na blọọgụ ụlọ ọrụ.
Echere m na ị nwere ọdịnaya ị nwere ịmara maka isiokwu na akụrụngwa iji nweta mmụọ nsọ. Ọ bụrụ n’ị ga-edobe usoro dị mkpa, ị ga-enwerịrị echiche mgbe niile, nke anaghị adị mfe.
M na-edebe ihe ederede anaghị m mkpa ịme ozugbo maka oge ndị ahụ enweghị ike iwepụta ihe ọ bụla. Ọ na - enyere aka mee ka ihe na - agagharị, ọbụlagodi na anaghị m edegara post ahụ n'onwe ya. Naanị inwe isiokwu ị ga-ede banyere ya na-enyere aka.
Ekwenyere m ma hụ ndụmọdụ gị n'anya! A na m enwekarị isi okwu echekwara na nke m maara na ọ dị m mkpa ịde blọgụ karịa. Ọ na-enyere aka na ike!
Yabụ ebumnuche onye na - ede blọgụ bụ ka o nwee isi ihe dị n'etiti triangle ahụ, echere m na ọ bụ ya mere ị jiri dọta ihe ndị ahụ na triangle ziri ezi?
Ee nke ahụ bụ n'ezie… ilekwasị anya n'akụkụ atọ bụ ihe na-eme ka ịga nke ọma na blọọgụ gị gaa nke ọma. Otu ihe dị mkpa m na-achọ ịgwa ndị mmadụ bụ na ịde blọgụ abụghị akụkụ 2. Inweta ọdịnaya na agụụ mmekọahụ ezughị - enwere usoro iheomume na-esochi na ị ga-ewulite ọsọ ọsọ.
Daalụ maka nzaghachi a (nye onye ọ bụla). Echiche gị na-enyere aka!
Hụ ihe oyiyi ahụ n'anya. #Hụnanya # 2 karịsịa - la pasión es MUY contagiosa.
Echere m na ọdịnaya ahụ bụ ihe kachasị mkpa. Nkọwa ọ bụla ị na-egosi ndị mmadụ ga-egosi ihe ị nwere ike ime. Họrọ isiokwu kwesịrị ekwesị n’oge kwesịrị ekwesị bara uru.
M hụrụ n'anya Google Ad-okwu. Na triangle gị chere, ọ na-atụ aro:
Paris Hilton > Eserese, Akwụkwọ ahụaja, Asịrị vidiyo, Blogs, Fanfare
Na-akpali… (ntụgharị: lol)
Emelitere m ihe ngosi ahụ iji mee ka ire ọkụ dị ka ọ bụghị 'lobster claw'.
Jul 18, 2007 na 6: 10 AM
N'anya triangle na post a… ọ sitere n'ike mmụọ nsọ taa.